Ninkaada Aad Ayuu U Shaqeeyaa Somaa? Hadaba Habkaan Ula Dhaqan . | alcarabiya.com
Home » Arimaha Qoyska » Ninkaada Aad Ayuu U Shaqeeyaa Somaa? Hadaba Habkaan Ula Dhaqan .
Ninkaada Aad Ayuu U Shaqeeyaa Somaa? Hadaba Habkaan Ula Dhaqan .
Waa qasab in ninka uu u shaqo tago qoyskiisa iyadoo maqnaashaha badan iyana ay ka careysiineyso haweeneyda ee hadaba talooyinkaan raac.
Tix gili daalka haya : waxaa waajib kugu ah in aad qadariso daalka haya si aad ula tacaamusho ninkaada oo ogaaw in adiga iyo caruurtaada uu u maqan yahay oo cadaadis ha saarin.
Is Bar bartaag: waxaa kuula gudboon in aad is bar bar taagto ninkaada aadna ka yareeyso dhibka shaqada , mar waliba caawi marka aad aragto in uu daalan yahay , dhiira gili si uu nasiino uu u dareemo.
Haku qaylin : waxaa laga yaabaa daalka dartiis in uu doonayo ninkaada in uu kaa yaro fogaado , balse in aad ku qayliso kuuma soo dhaweyneyso balse xaalka ayuu sii cakiranayaa waa uuna kaa caroonaya ee haku qaylin.
U dul qaado dib dhaciisa: waxa uu ninkaada ku qasbanaan karaa in uu xoogaa ku soo daaho shaqada ee fahan daalkiisa waa hubaal waa uu kaaga mahad celinayaa.	U sii diyaari cabitaan macaan : waxaad tix gilintaada ugu muujin kartaa ninkaada in guriga uu ugu yimaado cabitaan diyaarsan iyo cunno heer sare ah
U mahad celi : u mahad celi marka uu sidaas shaqada uu uga yimaado waxaad arkeysaa isaga oo dhoola cadeynaya kuguna farxaya .
Alcarabiya Hoyga Arimaha Qoyska , Waa Muhiim Fikirkaada Ku Aadan Mowduucaan.
One Response to Ninkaada Aad Ayuu U Shaqeeyaa Somaa? Hadaba Habkaan Ula Dhaqan .	fatuma maxamed Reply
February 18, 2013 at 11:27 pm	marka hore wad salaman tihin marka xigda wan idinkaga mahad celinaya